यी ६ हुन अभिनेत्री आलियाको प्रेमी ,जोसँग छोटो समयमै टुटेको थियो प्रेमसम्बन्ध (तस्विर) - Medianp.com
यी ६ हुन अभिनेत्री आलियाको प्रेमी ,जोसँग छोटो समयमै टुटेको थियो प्रेमसम्बन्ध (तस्विर)
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ००९:२३0
काठमाडौँ । फिल्मका अभिनेता र अभिनेत्रीबीच प्रेम सम्बन्ध रहनु सामान्य कुरा हो । त्यसैले केही कलाकारले यो सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्दछन् । तर केहीको यो सम्बन्ध नाटकमै सिमित हुन्छ । आज हामी त्यस्तै हल्ला मात्र चलेर छुटेको बलिउड अभिनेत्री आलिया भट्टको प्रेमसम्बन्धको बारेमा बताउदै छौँ । जसले ५ जना ब्यक्तिहरुसँग प्रेमको नाटक गरेर छोडेकी थिइन् । हेरौ को को हुन् ?
आलिया भट्ट र रणबिर
अहिले आलिया भट्टको प्रेम सम्बन्ध रणबीर कपुरसँग रहेको चर्चा चलेको छ । त्यतिमात्र होइन् ,यी दुईको विहे हुने समेत हल्ला बाहिर आएको छ । तर यो सम्बन्ध विवाहमा परिणत हुने कि विछोडमा परिणत हुने त्यो भने थाहा छैन् ।
आलिया भट्ट र कविन मित्तल
केही समय अगाडि आलिया भट्ट र कविन मित्तल प्रेम सम्बन्धमा रहेको खबर बाहिरिएको थियो । किनभने उनीहरुलाई धेरै ठाँउ सँगै भेटिएको थियो । तर पछि यो सम्बन्ध पनि लामो समयसम्म टिक्न सकेन् । कविन चर्चित व्यवसायी सुनील मित्तलका छोरा हुन् ।
बलिउडको अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रासँग पनि आलियाको प्रेम रहेको हल्ला चलेको थियो । तर पछि उनीहरुको निजी मामिलाको कारण प्रेम सम्बन्ध टुटेको थियो । यी दुवैले एउटै चलचित्र स्टुडेन्ड अफ द इयरबाट प्रवेश गरेका थिए ।
आलिया भट्ट र बरुण धवन
आलिया भट्ट र बरुण धवन पनि बलिउडमा सँगै प्रवेश गरेका थिए । पहिलो फिल्म सफल भएपछि यो जोडीले धेरै सुपरहिट फिल्महरुमा काम गरे । तर फिल्ममा अभिनय गर्दागदै यिनीहरु पनि प्रेम सम्बन्धमा रहेको चर्चा चल्यो । पछि यो सम्बन्ध पनि छोटो समयमा टुगिंयो ।
आलिया भट्ट र अली ददारकर
आलिया भट्ट र अली ददारकर सानो छदाँ स्कुलमा सँगै पढेका मिल्ने साथी हुन् । यी दुई स्कुलका साथीबीच पनि कुनै पनि समय प्रेमसम्बन्ध रहेको चर्चा चलेको थियो । तर पनि उनीहरुले हामी प्रेमसम्बन्धमा नभई साथी मात्र भएको बताएका थिए ।
आलिया भट्ट र रमेश दुबे
आलिया भट्ट र रमेश दुबे पनि ६ कक्षासम्म सँगै पढेका साथी हुन् । त्यसैले रमेश दुबेलाई आलिया भट्टको पहिलो प्रेम पनि भन्ने गरिन्छ ।
पाँचौ ग्लोबल आन्टरप्रनरशिप बूटक्याम्पमा प्रोफेसर मुहम्मद युनुस, नोबेल पुरस्कारका बिजेता बने किनोट स्पिकर
यी ५ हुन् ,बलिउडका सबैभन्दा धेरै सन्तान भएका अभिनेताहरु ! धमेन्द्रको मात्र छन् ६ सन्तान
साउथ सुपरस्टार बिजयको फिल्म ‘बीजिल’को ट्रेलर रिलिज, छोटो समयमै यति धेरै हेरियो (भिडियो)
गोविन्दाले ६ पटक फेरिसके आफ्नो नाम , पहिलो पटक के राखेका थिए नाम ?
फरहान खानको फिल्ममा अनुष्का शर्माको साथमा ऋतिक रोशन गर्दै ‘वार’ ?
‘वार’ यो बर्षकै सर्वाधिक कमाई गर्ने फिल्म , ‘कविर सिंह’को व्यापारलाई उछिन्यो
कपिल शर्मा एक एपिसोडको लागी कति लिन्छन् पारिश्रमिक ? शोमा गरे गायक उदित नारायणले खुलासा